कस्ता विद्यार्थी अष्ट्रेलिया जान सक्छन् ? कसरी प्रोसेस गर्ने ? - Himalayan Kangaroo
कस्ता विद्यार्थी अष्ट्रेलिया जान सक्छन् ? कसरी प्रोसेस गर्ने ?
Posted by Himalayan Kangaroo | २० आश्विन २०७५, शनिबार ०१:०० |
मेलबर्न । विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त शैक्षिक डिग्री र रोजगारीको राम्रो अवसरका कारण अष्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीहरुको पनि आकर्षक शैक्षिक गन्तव्यको रुपमा रहेको छ ।
तर अष्ट्रेलिया अध्ययनमा जानका लागि शैक्षिक स्तर भने राम्रो हुनुपर्छ । पछिल्लो समय प्लस टुमा प्रथम श्रेणी नै चाहिने अवस्था छ । अंग्रेजी भाषामा निकै दक्ष हुनुपर्छ । यसरी अष्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थीको आर्थिक स्थिति पनि कम्तिमा शिक्षण शुल्क तिर्न सक्ने हुनुपर्छ । त्यसो त मध्यमस्तरका आय भएका नेपालीले समेत अष्ट्रेलिया अध्ययन गर्न सक्छन् । तर कम्तिमा एक वर्ष त घरबाट नै खर्च जोहो गरेर जानु बुद्दिमानी ठहरिन्छ ।
अष्ट्रेलियामा कलेज अनुसार शिक्षण शुल्क पनि फरक फरक हुन्छ । कलेजको ब्राण्ड, गुणस्तर जस्ता कुराले शुल्क फरक पर्न जान्छ । अष्ट्रेलिया जानका लागि औसतमा १२ लाखदेखि २८ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लागेको पाइन्छ । विद्यार्थीले शुल्क तिरेर अष्ट्रेलियाको कुनै कलेजमा भर्ना भएपछि तिरेको पैसा डुब्ने सम्भावना हुँदैन । कलेज डुब्यो भने पनि त्यहाँको सरकारले विद्यार्थीलाई न्याय दिलाउने काम गर्छ । नर्सिङ, आइटि, इन्जिनियर, हस्पिटालिटि, विजनेश, पब्लिक हेल्थ, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट जस्ता विषय अष्ट्रेलियामा राम्रो मानिन्छ ।
कसरी जाने अष्ट्रेलिया ?
विद्यार्थीले शुरुमा आफ्नो प्रोफाइल तयार पार्नुपर्छ । त्यसपछि बल्ल भिसाका लागि आवेदन दिनुपर्छ । प्रोफाइलमा आर्थिक, शैक्षिक र अंग्रेजी भाषाको मापदण्ड पूरा भएको उल्लेख हुनुपर्छ ।
उक्त कागजपत्रलाई सम्बन्धित कलेज वा विश्वविद्यालयमा पठाइन्छ । यताबाट कागजपत्रको मूल्याङ्कन हुन्छ । यदि सबै मापदण्ड पुगेको ठहर भएमा विद्यार्थीलाई अफर लेटर पठाउँछ । त्यसपछि बैंकमा गएर तोकिए अनुसारको वित्तिय कागजपत्र तयार गर्नुपर्छ । अष्ट्रेलियाको लागि नबिल बैंक र एसबिआइ बैंकबाट वित्तिय कागजपत्र तयार हुन्छ । यी बैंकमध्ये कुनै एकबाट कलेजलाई पैसा भुक्तान गरिन्छ ।
त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक कन्फरमेशन अफ इन्भल्वमेन्ट आएपछि भिसा आवेदनका लागि मिति तय गरिन्छ । आवेदन दिएको ४ देखि ८ हप्ताभित्रमा भिसाको निर्णय आउँछ । त्यसपछि अध्ययनका लागि जाने तयारी सुरु गर्नुपर्छ ।
Previousनादिया : यौनदासीदेखि नोबेल पुरस्कार विजेतासम्म
Nextएनआईसी एसीया बैंकमा अष्ट्रलियन डलर सटही सेवा
अष्ट्रेलिया पढ्न आउने नेपालीले ‘क’ वर्गका जुनसुकै बैंकबाट ऋण लिन पाउने
६ बैशाख २०७४, बुधबार १६:०५
आज ६८ औं प्रजातन्त्र दिवस !
७ फाल्गुन २०७४, सोमबार ०३:३१
४ फाल्गुन २०७६, आईतवार ११:२१